Canada: onye dikwa Justin Trudeau ndụmọdụ na Africa? - Jeune Afrique - GHỌRAY AYBỌCH.
Canada: onye dikwa Justin Trudeau ndụmọdụ na Africa? - Ntorobịa Africa
Prime Minista Canada Justin Trudeau. Sean Kilpatrick / AP / SIPA
Prime Minista etinyela Africa n’okwu ya. Ka ọnwa nke asaa dị na Febụwarị, na Addis Ababa, o jiri ohere nzukọ ọgbakọ AU wee nwekwuo mkparịta ụka ya na ndị isi nke kọntinenti ahụ. Ebumnuche: na ha kwadoro nhoputa nke obodo ya maka oche onye otu na-anaghị adịgide adịgide na Council Security UN.
• Ahmed Hussen
© Minista Ahmed Hussen.
Minister nke Ezinụlọ. Amụrụ na Mogadishu. Onye rutere Trudeau na Addis, na Senegal. Ileta Africa ugboro itoolu dị ka Minister nke Immigrashọn (2017-2019). Onye isi oche na Canadian Somali Congress nwere nkwado na mmemme enyemaka maka mbata na ọpụpụ ndị Africa.
• Masai Ujiri
Fada onye amaala Naịjirịa bụ Masai Ujiri. Chris Young / AP / SIPA;
Onye egwuregwu Nigeria nke mbụ bụ ndị isi Raptors, otu egwuregwu basketball Toronto, nke meriri aha NBA mbụ ya na 2019. Onye guzobere NGO Giants nke Africa. Na-enye Trudeau abamuru nke akwụkwọ adreesị ya na kọntinenti ahụ. Gaa ọtụtụ n'ime okwu ya na Addis Ababa.
• François-Philippe Champagne
Onye Mịnịsta Ofesi. Na-akwadosi ike na obodo ya ga-enweta